अब ल्यान्डलाइन फोन राख्ने कि काट्ने ? | NepalDut
अब ल्यान्डलाइन फोन राख्ने कि काट्ने ?
कुमार लुइँटेल .
समस्या आएलगत्तै विराटनगर कार्यालयमा गुनासो गरेको थिएँ । बिहीबार दोस्रो पटक १९८ डायल गरेर फेरि गुनासो दर्ता गराएँ । यसअघि पनि ‘भैहाल्छ’ भन्ने जबाफ आएको थियो । सोमबार आफैँ कार्यालय गएँ ।
‘‘तपाइँको फोन अझै बनेको छैन ?’’ भन्दै त्यहीं रहेका एकजना प्राविधिकले उल्टै मलाई नै प्रश्न तेर्स्याए । खासमा डायलटोन आउने बनाउन पोल चढेर उनैले तार जडान गरिदिएका थिए । पन्ध्र दिनअघि तार जडान गर्दै उनले ‘‘भोलिसम्ममा टेलिफोन चल्छ’’ भन्ने आश्वासन दिएका थिए ।
‘‘तपाईंले पोल चढेर तार त जोडिदिनु भयो तर फोन आउने र जाने नै भएन’’ मैले जवाफ दिएँ । मैले गरेको गुनासोपछि मेरो फोनको समस्या बुझ्न र पोल चढ्ने गरी आउन उनैलाई एक महिना लागेको थियो ।
मर्मत शाखाका प्रमुखलाई भेटें । उनले ल्याण्डलाइन नम्बर डायरीमा नोट गरे । कुनै प्राविधिकलाई फोन लगाए जस्तो गरे । उताबाट के जवाफ आयो सुनिएन । नजिकै घुम्ने कुर्सीमा बसेका थिए । टेलिकमकै विवरणहरु क्प्युटर स्क्रिनमा हेर्दै थिए ।
उनले ‘‘अब भरेसम्ममा फोन चल्ने हुन्छ जानुहोस्’’ भने । म निस्किएँ । त्यस्तै समस्या लिएर बीमा संस्थान विराटनगरका प्रमुख पनि पुगेका रहेछन् । उनी पनि दिक्दारी मान्दै सिंढीबाट झरिरहेका थिए । हात मिलाएर छुट्टियौं ।
ल्यान्डललाइनको चक्करमा कर्मचारीबाट म झुलेको ठ्याक्कै दुई महिना भयो । बुधबार पनि पहिले १९८ डायल गरेर फेरि प्राप्त निर्देशनअनुसार ‘कम्प्लेन’ दर्ता गराएँ । त्यसपछि टेलिकम विराटनगरका प्रमुख घनश्याम महासेठलाई “Sir, I am Journalist of baahrakhari.com. I have complained for maintenance of my landline telephone but not any progress. I consulted more than 10 times to complain depart of NTC”. भनेर म्यासेज पठाएँ । त्यसको केहीबेरपछि फेरि फोन लगाएँ । यो पटक फोन उठ्यो ।
दुई दिनदेखि मेरो फोनको उनले ‘रेस्पोन्स’ नै गरिरहेका थिएनन् । रिङ जान्थ्यो तर उठ्दैनथ्यो । पत्रकारको परिचय खुलाएर ‘म्यासेज’ पठाएपछि किन हो कुन्नि उठाए ! मैले मेरो गुनासो र समस्या सुनाए ।
पत्रकार हुँ भने र मैले काम गर्ने संस्थाको परिचय पनि दिएँ । त्यसपछि उनले लोकसेन सोधे । भनिदिएँ । ‘‘भरेसम्ममा काम हुन्छ चिन्ता नगर्नुहोस्’’ भन्दै महासेठले फोन राखे । हाकिमले नै भनेपछि म आश्वस्त भएँ ।
म दिनभरिको काम सकाएर साँझमा घर फर्किएँ । मोबाइलबाट आफ्नो ०२१५२२०६७ मा फोन लगाएँ । तर, डायल नभई कट्यो । सन् २००४ मा ब्रोडसिट दैनिक पत्रिकाको सम्वाददाता भएर झापा खटिएदेखि नै म टेलिकमको ग्राहक छु । अहिले पोस्डपेड मोबाइल चलाउँछु । दस वर्षअघि तीनघन्टा लाइनमा बसेर लिएको प्रिपेड नम्बर पनि अझै चालु छ ।
फोन र इन्टरनेटकै बलमा मेरो जागिर चल्छ । यी दुवै नहुने हो भने पत्रकारको त्यसमा पनि अनलाइनमा कामै हुँदैन । मोबाइलमा मासिक रु. २ हजार जति खर्च हुन्छ । एडीएसलमा रु. ८ सय तिर्छु । अनलाइनमा आएपछि घरमा हुँदा इन्टरनेट नभए त झन् अन्धकार नै हुन्छ । केही समाचार छुट्ला भन्ने पिर भइरहन्छ । तर, टेलिकमले मजस्ता ग्राहकलाई त ध्यान दिँदैन भने ‘‘महासेठ जस्ता हाकिमसँग पुग्न नसक्ने ग्राहकको हविगत के होला ?’’ भन्ने मनमा भाव आयो ।
4G …..जी नबनोस् !
उनको जस्तै गुनासो नागरिक दैनिकका चुमन बस्नेतको पनि थियो । मेलै पनि मेरो थ्रीजी सीमलाई फोरजी बनाउन टेलिकमको सन्देश निर्देशनअनुसार गरे । सिम फोरजीमा रुपान्तरण बनेको सन्देश आयो ।
२०० एमबी डाटा पनि आयो तर, त्यसलाई चलाउने हिम्मत भएन । साथीहरुले ब्यालेन्स कटेको जो सुनाएका थिए । धुमधामसाथ सुरु गरिएको टेलिकमको थ्रीजीबारे सर्वसाधारण र पत्रकार वृत्तमा हिजोआज पनि एउटा हास्यब्यंग हुने गर्छ । ‘‘थ्रीजी भनेर सेवा लिएको अर्कै जी जस्तो पो परेछ, पैसा कट्छ तर चल्दैन ।’’